4G Plus ဝန်ဆောင်မှုအား စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဟု အူရီဒူးက ကြေညာ
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၀ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် 4G Plus ဝန်ဆောင်မှုအား ယခုမေလမှ စတင်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဟု အူရီဒူးက ယနေ့ကြေညာလိုက်သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ 4G Plus ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ထပ်ဆောင် တဆင့်တက် ပေးနိုင်တော့မှာပါ”ဟု အူရီဒူးမြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Rene Meza က ပြောကြားသည်။.
အဆိုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးတော့မည်မဟုတ်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်
သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ရှယ်ယာများအား ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စတင်ရောင်းဝယ်နိုင်တော့မည်
ရန်ကုန်၊ မေ ၉ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ရှယ်ယာများကို ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ခွင့် ရရှိသွားပြီဖြစ်သဖြင့် မေ ၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ရောင်းဝယ်နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ “မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုး(လ်)ဒင်း(စ်) ပတ်ဘလစ် လီမိတက် (MTSH) သည် ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာများကို စာရင်းဝင်အဖြစ် တင်သွင်းရန် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း (YSX) မှ.
ပခုက္ကူမြို့ရဲ့သုဿန်တစ်ခုက ရဲရင့်တက်ကြွတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အမျိုးသားတစ်ချို့ရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ စော်ကားပြုမူမှုတွေ ခံစားနေရပါတယ်။ ဟိန်းကိုစိုး ရေးသားသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခန့်အချိန်၊ လူသူ လုံးဝမလာတဲ့အရပ်၊ ပခုက္ကူမြို့ရဲ့ အစွန်ဘက် တစ်နေရာမှာ မိသားစုတစ်စုဟာ မိခင်ဖြစ်သူ မီးဖွားတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်.
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအား တန်းတူအခွင့်အရေးပေးရန် ထိုင်းကို သမ္မတဦးထင်ကျော် ပြောကြား
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာ
တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ကြေးနီသတ္တုတွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို မေလတွင် စတင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်ဟု ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ပြောကြားထားသည်
ငါးရက်အတွင်း ညှိနှိုင်းထားသည့်အတိုင်း မပြေလည်ပါက အလုပ်သမားသပိတ် နေပြည်တော်သို့ ဆက်လက် ချီတက်မည်
အလုပ်သမားများက အလုပ်ပြန်လုပ်ခွင့်၊ အလုပ်ထုတ်ခံထားရသည့် ကာလအတွက် နစ်နာကြေးနှင့် ကုမ္ပဏီကို အရေးယူပေးရန် တာဝန်ရှိသူတို့ထံ တောင်းဆို
ဖားကန့်တွင် မြေစာပုံ ပြိုကျမှုကြောင့် ၁၃ ဦးသေဆုံး
မြေစာပုံ ပြိုကျမှု ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် သေဆုံးသူ ၁၃ ဦး၏ ရုပ်အလောင်များကို မြေကြီးများအောက်မှ ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ရပ်နားခဲ့
ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံသား စိစစ်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်နေ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ရသေ့တောင်မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံသားစိစစ်မှုကို ထိရောက်စွာလုပ်ပေးရန် အဆို တင်သွင်းခဲ့သည်